'भीडलाई लिएर क्वारेन्टाइन बनाउन जाऔँ' :: विवेक त्रिपाठी :: Setopati
'भीडलाई लिएर क्वारेन्टाइन बनाउन जाऔँ'
कोरोना (कोभिड-१९) चीनको वुहानबाट सुरु भएर विश्वभर माहामारीको रुपमा फैलिरहेको छ। जसबाट हाम्रो मुलुक नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। हाम्रो मुलुक मात्र होइन, विश्वका कुनै पनि मुलुक यो संकटसँग अछुतो रहन सकेनन् । तर, यो महामारीसँग जुध्न सक्ने पुर्व पूर्ण तयारी पनि त कसैसँग थिएन। अन्य मुलुकका सिकाई सिक्दैजाँदा तयारीहरु थपिदै गएका छन्। आशा गरौँ निकट भविष्यमा उपचार पत्ता लाग्ला।
हाम्रो देशमा पनि संक्रमण देखिएपछि क्वारेन्टाइन, कोरोना परीक्षण लगायत व्यवस्थापन तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने भयो र गरियो र अहिले पनि गरिदैछ। तर कतिपय कुरालाई लिएर केही विवाद पनि भएको छ। जस्तो अमेरिकामा पनि कोरोना टेस्ट किटलाई लिएर विवाद छ। हाम्रो मुलुकमा पनि विभिन्न कोणहरुबाट यसको रोकथामका लागि कुराहरु उठेका छन्, त्यो स्वभाविक हो। उठ्नु पर्छ समाधानका उपायहरु खोजिनु पर्छ, बल्ल हामी यो युद्ध जित्ने छौँ। तर त्यो सुस्पष्ट हुनुपर्छ। तार्किक हुनुपर्दछ।
नयाँ रोगका कारण सिँगो मानव समुदाय हामी सबै त्रसित छौँ। त्रासका कारण हामी त्यस प्रति बढी सजग पनि छौँ। यो सान्दर्भिक कुरा छ। तर, हाम्रो मुलुकमा भएका पछिल्ला केही घटनाक्रमहरुले अब त्रास आक्रोसमा परिणत गरिन खोजे जस्तो लाग्दै छ। जब मान्छेले चेतना गुमाउछ हिंस्रक बन्दछ। हिंसाको परिणाम के हुन्छ भनेर म बबुरोले तपाईहरुलाई बुझाइ रहनु नपर्ला। तपाईहरु जान्ने हुनुहुन्छ। हाम्रो डरको फाइदा उठाएर हामीलाई हिंस्रक बनाउन खोज्ने खालका गतिविधि देखिन थालेका छन् । यो प्रवृत्ति गलत छ। सजक रहनु पर्छ भन्ने सन्देश भाव सहीतको आलेख हो यो।
म केही उदाहरण दिन चहान्छु र आन्दोलनकर्ताहरुलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु।
हाम्रो सरकार छ, हामीलाई जोगाइ हाल्छ नि भनेर डान्सबार, पब, हुल र भीडभाड गर्दै हिडे्ने नागरिकको विश्वास भएका मुलुकहरुमा त सरकारले हात उठाउनु परेको उदाहारण हाम्रो आँखा अगाडि नै छन्। हाम्रो देशमा त सरकारले अब जोगाउदैन भन्ने लागेर नै सडकमा उत्रिएकाहरुले विश्वास गर्ने त कुरै भएन।
म सोध्न चाहान्छु, तपाईहरुले कोरोनाबाट बच्न चालेका कदमहरु के-के हुन्? कति नागरिकलाई कोरोना संक्रमित हुनबाट जोगाउनु भयो? क्वारेन्टाइन डव्लुएचओको मापदण्डअनुसार भएन भनेहरु डब्लुएचओले नै भनेको भीड जम्मा नगर्नुहोस्, सार्वजनिक स्थलमा नजानुस्, भनेको किन भुल्नु भएको? किन नमान्नु भएको? कति नागरिकहरुलाई डव्लुएचओको प्रोटोकल अनुसारको क्वारेन्टाइन बनाएर तपाईहरुले राख्नु भयो?
सिर्फ हंगामा गरेर अभियान्ताको ठूलो माला भिर्न सक्नु होला तर असल नेता बन्न सक्नु हुन्न। असल नेता सही मार्ग निर्देश गर्छ, समाधानका उपायहरू देखाउँछ, आफै समाधान गर्छ। भीडभाड खोज्दैन। त्यसैले त डाक्टर ललितकुमार दासहरु जस्ता भीड खोज्दैनन्। यदि एउटा भोटले नेता बदल्न सक्छ भने त्यही एउटा व्यत्तिले एक्लै सिँगो व्यवस्था बदल्न किन सक्दैन? जरुर सक्छ। तर, उद्देय देखाउने/देखाईदिने हुनु भएन।
यो इखले भरिएर देखाईदिने आन्दोलन जस्तो बन्दै छ। युवाको जोशलाई डाक्टर दास बन्ने प्रेरणा दिउ गणेशमानले भने जस्तो भेडा बनाउने काम बन्द गरौँ।
सरकारले जसरी गर्नु पथ्यो, गर्न सकिरहेको छैन, यो तितो यर्थाथ हो। विश्वका सम्पन्नशाली राष्ट्रहरु अमेरिका इटली भारत लगायत देशहरु आज कोरोनाको अगाडि निरीह प्रायः छन्। त्यसैले त विश्वमा स्वास्थय संकटकाल घोषणा गरिएको छ। यता केही गरेन भनेर फेरि हामी युवाहरु पनि अबुझ बन्ने। सरकारले सकेको सरकारले गरेको छ हामीले सकेको हामीले किन नगर्ने?
हाम्रो राष्ट्रसँग प्राबिधिक ज्ञानको अभाव छ। जनशक्तिको अभाव छ। बियुरोक्रेसी र हाम्रो केही नेत्रित्वमा अल्पज्ञान पनि छन्। विदेशी मुलुकमा श्रमिकको रुपमा गएका हाम्रा दाजुभाइहरुलाइ स्वदेश ल्याउने सही व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षित राख्ने उपायहरु खोज्नुको बदला नारा लगाउन पुग्नु अलि गलत भएन? सोचौं त साथीहरु। हो, सरकारसँग पनि अभावहरु होलान्, हामीहरुसँग जस्तै। हाम्रो सरकार हो भने सामना पनि त हामी सबै मिलेर गर्नु पर्ने होला नि।
लिपुलेक हाम्रोभन्दा हामी सबै एक भएर लाग्छौँ तर कोरोनाको महाविपत्तिमा पनि सँगै लड्न पाए? सिमित स्रोत र साधनहरु बीच पनि सही उपाय बनाएर विदेशी भूमिमा भएका हाम्रा दाजुभाइलाई स्वदेश ल्याएर सही व्यवस्थापन गर्न पाए। यता सोचौँ न। समाधान यस्ता विषयमा खोजौँ, सडकमा होइन।
काठमाडौं, आज पोखरा लगायत केही सहरहरूमा गरिएको प्रदर्शनीमा कति कुराहरु सचेत नागरिकहरुले राख्नु पर्ने कुराहरु राख्नु भएको छ। म सम्मान गर्छु। तर तिनै कुरा राख्नलाई यत्रो हंगामा किन गर्नु पर्छ र? त्यो भीड जम्मा पार्न तपाईहरुले सोसल मिडियाको प्रयोग गर्नु भएको छ। अझ सोसल साइटमा पहुँच भएकाहरु नै आन्दोलनमा उपस्थित हुनुहुन्छ सबै जना। त्यो सोसल साइटले यत्रो भीड जम्मा गर्ने सक्छ भने त्यहीबाट सरकारलाई सुझाव दिन पनि सक्थेन होला र?
तर, तपाईहरुले गर्नु भएन किन? भिडियो पोष्टर बनाएर तपाईहरु मान्छे बोलाउन सक्नु हुन्छ तर तिनै कुरा सोसल साइटमा भिडियो, पोस्टर मार्फत किन राख्न सक्नु भएन? के डव्लुएचओको नियम सरकारलाई मात्र लाग्ने हो तपाईलाई लाग्दैन कि तपाईहरुले मान्नु पर्दैन? यदि संक्रमण अझै भयावह रुपमा फैलियो भने जिम्मेवार को हुने?
सरकार करिब ९० दिन यता घर भित्र बस्दा-बस्दै वाक्क लागेर यसो फ्रेस हौँ भनेर निस्कनु भएको हो भने मेरो भन्नु केही छैन। होइन भने, तपाईहरु किन समाज प्रति उत्तरदायी नहुने?
कोरोना महामारीसँग जुध्न के भने जस्तो तयारी सबै मुलुकले गर्न सकिरहेका छन् त? अवश्य छैन तर गरेन भन्ने लागेकाहरु क्वारेन्टाइन बनाउन जाने हो कि कागज लिएर भीड जम्मा गर्नरु सर्बेसर्वा सरकार त होइन नि, सरकारलाई दवाब दिन भीड जम्मा पार्न सक्नेहरु स्वास्थ स्वयमसेवकको रुपमा फिल्डमा जान सक्नु हुन्छ कि नाई? यो माहाबिपत्तिको बेला। जब युवाहरु देखावटी राजनीतिमा विश्वास गर्छन् र त देशको हालत यस्तो हुन्छ।
आउनुहोस् त्यो भीडलाई लिएर क्वारेन्टाइन बनाउन जाउँ, जहाँ छौँ त्याहाँ वरपरका मजदूर गरिब वस्तीहरुमा खाना बोकेर जाउँ। आफ्नो गाउँ टोल छर-छिमेक सुरक्षित राखौं। आफू पनि सुरक्षित बसौँ। अरु हिसाब-किताब पछि गरौँला, अहिले कोरोनालाई जित्दै भोकमरीलाई जितौँ।
(लेखक संघीय युवा संजालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।)
प्रकाशित मिति: आईतबार, जेठ ३२, २०७७, १०:५३:००